Isiseko seBongo: ii-neurochemicals, khumbula ukuqala kuqala Umvuzo weZiseko
Ikhaya Basics Brain Neurochemicals
Ukhumbule ubumnandi bokuqala obuthandana naye?
Naluphi na ukuhlangana kwakho kokuqala okuthandana, kwenzeka ukuba ukhumbule yonke into malunga nendawo ... indawo, inkohlakalo, intle, oko ubenxibe, imvakalelo yemilomo ixuba, umdlalo womculo kunye nomoya wokutshata kunye nethemba elizayo. Mhlawumbi kwenzeka xa uselula. Kuyamnandi ukuba ube nesithandane malunga naloo nto kuqala, kodwa ngaba uyazi ukuba kwakuyizidumbu zeekhemikhali ze-neurochem in brain yakho eyenza amava?
Awuyi kususa kwimfihlelo yothando ukukwazi oku, kodwa kuya kusinceda siqonde ukuba kutheni ezinye iimvakalelo kunye namava anamandla kwaye zenza izikhumbuzo ezinjalo.
Ngoko kwenzeka ntoni emva koko? Ekuboneni kokuqala komnqweno wethu, intliziyo yethu ibetha ngokukhawuleza kwaye sinokuthi 'sivutha' ngakumbi okanye saqala ukuthuthumela. Yayiyo imeko yethu yokuvusa adrenaline. Ukulindela kwintlalo kunye nomvuzo osiqhubisayo ukuba sisebenzisana nomntu omtsha, wenziwa ngu-teh-get-it-neurochemical dopamine. (Le vidiyo ikhonkco ludliwano-ndlebe kunye neengcali ezifumene iinkalo ezifunayo kunye nezifayo ezinqwenelekayo yi-dopamine.) I-Dopamine inceda ukumisa imemori yeso siganeko, ingakumbi xa siqhubeka sicinga okanye sithetha ngayo. Iintsholongwane zivelisa i-dopamine engaphezulu kunabantu abadala okanye abantwana kwaye bayayiqonda.
Iimvakalelo ezithandekayo zokubanga nokuzivuma ziza kuvela kumkhukula Opioids kwiziko lokuvuza eliye lakhupha emva kokuba i-dopamine. Kwakhona, njengokuba i-dopamine, intsha ivelisa ii-opioids ezininzi kunabantu abadala okanye abantwana.
Imiva yokulwa nobudlelwane
Ukuvakalelwa kunye nokuthembela okuza xa sivumela umntu ukuba abe sisondele okanye esondeleyo yioxytocin. Ukuba uziva ujabule kwaye unelulwazi ngcamango yokuba ufumene iqabane elithile, mhlawumbi lucaliswa ngamanqanaba okwanda serotonin kwingqondo. Isebenza xa siziva sinelisekile okanye sinesimo sengqesho ekuhlaleni, njengokuba sifumane umntu ukuba amthande, ithuba lokuba sibini. Nayiphi na intloko okanye iintlungu zaziya kubonakala njengoko endorphins ukukhawulela ukusigubungela intlungu.
Uya kukhumbula le mva yeemeko kakuhle ngenxa yokuba, ebuchosheni bakho bokuqala, kwakukho isiganeko esitshintsha ubomi. Kuye kwakha indlela enamandla yokhumbula inkohlakalo yakho, ikukhumbuze iimvakalelo ezimnandi kwaye ikukhuthaza ukuba uphinde uphinde uziphathe ngokuphindaphindiweyo.
Ukuba isithandwa sakho sabuyela ekuthinteni kwaye sasifuna usuku, intliziyo yakho yayiza kuwehla ukubetha ngokuphindaphindiweyo kunye nomjikelezo wamachiza e-neurochemicals xa ulindele ukuzonwabisa kunye neengcamango zakho zexesha elizayo eliyolo kunye.
Ukuba kunjalo, wayengenomdla nakwezinye iintlanganiso, mhlawumbi unokuvelisa cortisol, uxinzelelo lwe-neurochemical lidibene nokuxinezeleka. Ukucinga okungekho ukuyeka ngendlela yomntu malunga nomntu okanye imeko, oko wenza / okanye akwenziwanga, kunokubangelwa yimiphumo ephantsi ye-serotonin. Oku kufumaneka kwintlungu yokunyanzelisa. Intukuthelo ekukhungeni komgomo wethu okanye umnqweno unokukhokelela ukukhubazeka kwempilo yengqondo ukuba asifundanga ukucinga ngokwahlukileyo malunga nemeko.
I-dopamine eninzi kwaye ayinayo ngokwaneleyo i-serotonin, i-neurotransmitters ye "ingonwaba" yengqondo kunye "nolonwabo" ngendlela elandelanayo, ifuthe iimvakalelo zethu. Khumbula ke, ukuba uvuyo nolonwabo alukho into efanayo. I-Dopamine "umvuzo" we-neurotransmitter exelela ubuchopho bethu: "Oku kukuva, ndifuna okungaphezulu." Kodwa ukubonakaliswa okukhulu kwe-dopamine kukukhokelela kumlutha. I-Serotonin yi-neurotransmitter ethi "ukwaneliseka" okuxelela ubuchopho bethu: "Oku kulungile. Ndi neleyo. Andifuni okanye ndifuna enye. "Kodwa i-serotonin encinane kakhulu iholele ekudakaleni. Ngokufanelekileyo, zombini kufuneka kube nokubonelela ngokufanelekileyo. I-Dopamine iqhuba i-serotonin. Kwaye uxinzelelo olungapheliyo luqhubela phambili bobabini.
Ukufunda ukuwaneliseka nokungafuneki ukukhutshwa ngokukhawuleza kokuvuselela kwisifundo esibalulekileyo sokufunda. Ngoko kufunda ukulawula iingcamango zethu, iingcamango neemvakalelo.
Incwadi ethi Loretta Breuning ibiza ngokuthi "Iimpawu ezivuyayo zobomi obonwabileyo"Kunye naye website ukubonelela ngokumnandi kwiimveliso ze-neurochemicals ze-neurochemicals.
<< I-Neuroplasticity Inkqubo Yomvuzo >>